အိမ်မှာ‌နေတုန်း စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့ မြတ်ကေသီအောင် . - Myannewsmedia
By frozePosted on March 31, 2020
ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သလို ယနေ့ချိန်ထိလဲ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေများစွာ ရိုက်ကူးနေရဆဲဖြစ်ပြီး ယနေ့ချိန်ထိလဲ နုပျိုလှပခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူမက အနုပညာလုပ်ငန်းတွေသာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လဲ ဖြစ်လှစ်ထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေလဲ ရပ်နားထားရသလို ဆိုင်လဲ ပိတ်ထားတာကြောင့် သူမက အိမ်ကနေ မုန့်တွေလုပ်ရောင်းဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ် ။ သူကတော့ ဆိုင်ဖွင့်ထား တဲ့အတွက် မုန့်လုပ်နည်းမျိုးစုံကိုလဲ သင်ယူလေ့လာထားတ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
သူပြောခဲ့တာကတော့ ” အိမ်ထဲမှာပဲနေကြရမယ်ဆိုတော့ အားနေတဲ့အချိန်တွေ အကြိုးရှိအောင် ချိစ်ကိတ်, ကန်ဇွန်းဥ ကျောက်ကြော, ဌက်ပျော်ဆနွင်းမကင်း.ကြက်ကောက်ညှင်း,ရွှေကြည်ဆနွင်းမကင်း. အာလူးဆနွင်းမကင်း, ကြက်သားဟင်းထုတ်,ကင်မ်ချီ လုပ်ရောင်းရင်ကောင်းမလားလို့စ်…..မှာမယ်လည်းမထင်ပါဘူး🤣🤣” လို့ ဆိုကာ သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မြတ်ကေသီအောင်ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ သူလုပ်တဲ့ မုန့်လေးတွေကို ဝယ်ယူအားပေးကြမှာလား ဆိုတာပြောခဲ့ကြအုံးနော် ။ ဒါနဲ့ ပရိသတ်ကြီးက အပြင်မထွက်ဘဲ အိမ်ထဲမှာဘဲ နေကြပါအုံးလို့ ။
Source – myat kaythi aung’sfb
အိမျမှာ‌နတေုနျး စီးပှားရေးတဈခုလုပျဖို့ စိတျကူးနတေဲ့ မွတျကသေီအောငျ …
ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သလို ယနခြေိ့နျထိလဲ ရုပျရှငျကားကွီးတှမြေားစှာ ရိုကျကူးနရေဆဲဖွဈပွီး ယနခြေိ့နျထိလဲ နုပြိုလှပခွငျးကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ သူမက အနုပညာလုပျငနျးတှသောမက စီးပှားရေးလုပျငနျးအဖွဈ စားသောကျဆိုငျတဈဆိုငျလဲ ဖွဈလှဈထားပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါကွောငျ့ အနုပညာအလုပျတှလေဲ ရပျနားထားရသလို ဆိုငျလဲ ပိတျထားတာကွောငျ့ သူမက အိမျကနေ မုနျ့တှလေုပျရောငျးဖို့ စဉျးစားနပေါတယျ ။ သူကတော့ ဆိုငျဖှငျ့ထား တဲ့အတှကျ မုနျ့လုပျနညျးမြိုးစုံကိုလဲ သငျယူလလေ့ာထားတျလို့လဲ သိရပါတယျ။
သူပွောခဲ့တာကတော့ ” အိမျထဲမှာပဲနကွေရမယျဆိုတော့ အားနတေဲ့အခြိနျတှေ အကွိုးရှိအောငျ ခြိဈကိတျ, ကနျဇှနျးဥ ကြောကျကွော, ဌကျပြျောဆနှငျးမကငျး.ကွကျကောကျညှငျး,ရှကွေညျဆနှငျးမကငျး. အာလူးဆနှငျးမကငျး, ကွကျသားဟငျးထုတျ,ကငျမျခြီ လုပျရောငျးရငျကောငျးမလားလို့ဈ…..မှာမယျလညျးမထငျပါဘူး🤣🤣” လို့ ဆိုကာ သူ့ရဲ့ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
မွတျကသေီအောငျကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ သူလုပျတဲ့ မုနျ့လေးတှကေို ဝယျယူအားပေးကွမှာလား ဆိုတာပွောခဲ့ကွအုံးနျော ။ ဒါနဲ့ ပရိသတျကွီးက အပွငျမထှကျဘဲ အိမျထဲမှာဘဲ နကွေပါအုံးလို့ ။
Previous post စုဆောင်းထားတာလေး ထုတ်ရောင်းပြီးလှူလဲလှူရင်း ခြိုးခြံ စားနေတယ်လို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ပိုပို …
Next post ပရိသတ်တွေမျှော်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အမိုက်စားပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ လွှမ်းပိုင်ရဲ့ Stay Home Burmese Rap Challenge …